Xinhua Myanmar - အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၏ ရှတှေငျး မွပွေိုမှုတှငျ အနညျးဆုံး ၅ ဦးသဆေုံး ၊ ၇၀ ကြျော ပြောကျဆုံးနေ
အငျဒိုနီးရှား သဆေုံး ရှတှေငျး ပွိုကြ
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ ဆူလာဝဆေီပွညျနယျ မွောကျပိုငျး Bolaang Mongondow ခရိုငျတှငျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ ၂၈ ရကျက လိုငျစငျမဲ့ရှတှေငျးတဈခု ပွိုကမြှုဖွဈပှားပွီးနောကျ ကယျဆယျရေးသမားမြားက ရုပျအလောငျးတဈလောငျးကို သယျထုတျလာစဉျ(ဆငျဟှာ) Asia
ရကျပေါငျးမြားစှာ မိုးအဆကျမပွတျရှာသှနျးမှုကွောငျ့ Parigi Mountong ခရိုငျ Buranga ကြေးရှာရှိ မိရိုးဖလာ လကျလုပျ ရှတှေငျးတဈခု၏ မွအေောကျဥမငျတှငျ မွပွေိုမှု ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး အခငျးဖွဈနရောသို့ရောကျရှိနသေညျ့ ပွညျနယျသဘာဝဘေးအန်တရာယျစီမံခနျ့ခှဲရေးအဂေငျြစီအကွီးအကဲ Datu Pamusu Tombolotutu က ဆငျဟှာသတငျးဌာနသို့ တယျလီဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျဖွကွေားခဲ့သညျ။
“ ရုပျအလောငျး ၅ လောငျးကို ကြှနျတျောတို့ရှာဖှတှေရှေိ့ထားပါတယျ။ ပြောကျဆုံးနသေူတှရေဲ့ မိသားစုဝငျတှဆေီကလညျး တိုငျကွားမှုတှကေို လကျခံရရှိထားပါတယျ ၊ အမြားစုကတော့ မွအေောကျမှာ ပိတျမိနဖေို့ မြားပါတယျ ” ဟု Pamusu ကဆိုသညျ၊။
ရှာဖှရေေး နှငျ့ ကယျဆယျရေး လုပျငနျးမြားကို ဖဖေျောဝါရီ ၂၄ ရကျကတညျးက လုပျဆောငျနကွေောငျး ၊ အခငျးဖွဈနရောတှငျ မွတေူးစကျတဈလုံး နှငျ့ အခွားသော ကယျဆယျရေးကိရိယာမြားကို အသုံးပွုဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
စဈသားမြား ၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ၊ ရှာဖှရေေး နှငျ့ ကယျဆယျရေး ဝနျထမျးမြား နှငျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျစီမံခနျ့ခှဲရေးအဂေငျြစီမှ တာဝနျရှိသူမြားသညျ စတေနာ့ဝနျထမျးမြားနှငျ့အတူ ရှာဖှရေေး နှငျ့ ကယျဆယျရေးလုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး အဆိုပါ အရာရှိက ဆိုသညျ။(Xinhua)
JAKARTA, Feb. 25 (Xinhua) -- Five bodies have been recovered and about 70 others were reported missing following landslides atagold mine in Indonesia's Central Sulawesi province on Wednesday afternoon,adisaster agency official said on Thursday.
Soldiers, policemen, personnel from local search and rescue office and from disaster agency along with volunteers have been involved in the search and rescue mission, the official said. Enditem
Photo caption- Members of Indonesian Search and Rescue (SAR) team pull outabody ofagold miner after an unlicensed gold mine collapsed at Bolaang Mongondow district of North Sulawesi province, Indonesia, Feb. 28, 2019. (Xinhua/Stri
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ရွှေတွင်း မြေပြိုမှုတွင် အနည်းဆုံး ၅ ဦးသေဆုံး ၊ ၇၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေ
ဂျကာတာ၊ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူလာဝေဆီပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခုတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် ညနေပိုင်းက မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရုပ်အလောင်း ၅ လောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီး အခြား လူပေါင်း ၇၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီမှ အရာရှိတစ်ဦးက ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ရက်ပေါင်းများစွာ မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် Parigi Mountong ခရိုင် Buranga ကျေးရွာရှိ မိရိုးဖလာ လက်လုပ် ရွှေတွင်းတစ်ခု၏ မြေအောက်ဥမင်တွင် မြေပြိုမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်နေရာသို့ရောက်ရှိနေသည့် ပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲ Datu Pamusu Tombolotutu က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ဖြေကြားခဲ့သည်။
“ ရုပ်အလောင်း ၅ လောင်းကို ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဆီကလည်း တိုင်ကြားမှုတွေကို လက်ခံရရှိထားပါတယ် ၊ အများစုကတော့ မြေအောက်မှာ ပိတ်မိနေဖို့ များပါတယ် ” ဟု Pamusu ကဆိုသည်၊။
ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်ကတည်းက လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၊ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် မြေတူးစက်တစ်လုံး နှင့် အခြားသော ကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာများကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
စစ်သားများ ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ဝန်ထမ်းများ နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူများသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါ အရာရှိက ဆိုသည်။(Xinhua)
ပုံစာ- အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူလာဝေဆီပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း Bolaang Mongondow ခရိုင်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်က လိုင်စင်မဲ့ရွှေတွင်းတစ်ခု ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ရုပ်အလောင်းတစ်လောင်းကို သယ်ထုတ်လာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
#အင်ဒိုနီးရှား,#ရွှေတွင်း,#ပြိုကျ,#သေဆုံး,#ပျောက်ဆုံး #Indonesia, #Gold mine, #landslide, #kill, #missing, #ဆင်ဟွာ
Previous Article အိန်ဒိယနိုငျငံနှငျ့ ပါကစ်စတနျနိုငျငံက နိုငျငံတကာနယျစပျတှငျ အပဈအခတျရပျစဲရေးကွညော
Next Article အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ အနောကျဂြာဗားတှငျ ရကွေီးမှု ဆိုးဆိုးရှားရှာဖွဈပျေါနေ